Xagee laga cunaa Madrid? 9 makhaayadood oo lagu taliyey magaalada | Wararka Safarka
Madrid waa magaalo aad u qurux badan oo leh a dalab gastronomic fiican. Fursadaha ayaa ah kuwo aan dhamaad lahayn waxaana dhihi karnaa waxaad isku dayi kartaa suxuunta inta badan qaaradaha caasimada. Si kastaba ha noqotee, marka dalabku aad u ballaaran yahay way adag tahay in la doorto. Haddii aadan ka aheyn Madrid oo aad booqaneyso, waxaad u badan tahay inaad ka baqeyso inaad fariisato meel qaldan oo aad ku dhameysato lacag badan oo cuntada ah.
Dhinaca kale, haddii aad ka timid magaalada ama haddii aad joogto u tagto, waxaa laga yaabaa inaad ku dhammaato wax ka cunidda isla meelaha had iyo jeer. Haddii aad gebi ahaanba lumisay ama haddii aad rabto inaad soo hesho meelo cusub, waxaad ku jirtaa nasiib Ma dooneysaa inaad ogaato halka laga cuno Madrid? Qoraalkan waxaan kula wadaagayaa 9 makhaayadood oo lagu taliyey magaalada.
3 Aqalka Penthouse 11
4 Duqa Magaalada Taqueria El Chaparrito
6 Guriga Lhardy
8 Tavern iyo Warbaahinta
Helitaanka makhaayad aad si wanaagsan oo raqiis ah wax uga cuni karto bartamaha Madrid waxay noqon kartaa caqabad. Escarpín waa a Guriga cidiyaha Asturian ee nolosha oo dhan Waana mid ka mid ah meelaha aad ugu dambayso calool buuxa qiimo macquul ah. Waxay ku taal Calle Hileras, oo aad ugu dhow Duqa Magaalada Plaza. Makhaayada ayaa albaabada loo furay sanadkii 1975-tii waxayna noqotay meel casri ah oo dib loo habeeyay, iyadoo ilaalinaysa nuxurkeeda soo jireenka ah.
Escarpín wuxuu bixiyaa a menu maalinle ah oo dhammaystiran, koorsooyinka koowaad iyo labaad, oo kaliya 12 euro. Intaa waxaa sii dheer, liistadeeda waa mid aad u kala duwan, waxaad dooran kartaa menu dhadhan fiican ama waxaad dooran kartaa saxanka Asturian ee caadiga ah. Haddii aad tagto, hubi inaad tijaabiso cachopo gaar ah saddex jiis, oo u gaar ah guriga, iyo digirta leh clams, kuwaas oo si gaar ah u wanaagsan.
Waan jeclahay hummus. Xaqiiqdii, waan qaadan karaa maalin kasta oo noloshayda ah anigoon caajisin. Si kastaba ha noqotee, weligey kuma fikirin inay jiri karto makhaayad diiradda saari doonta dhammaan cuntooyinkeeda saxan, asal ahaan ka soo jeeda Bariga Dhexe. La Hummuseria, waxaa furay 2015 lamaane israail u dhashay, waxay bixisaa cunno caafimaad leh oo leh xulashooyinka vegan oo hummus uu yahay jilaa. Marka, haddii aad jeceshahay khudradda, dhir udgoon iyo, dabcan, hummus, ma tabi kartid maqaayaddan! Waa banaanbaxa inaad wax ka cuni karto, ku raaxeysan karto dhadhan aan la tirin karin iyo inaad ilaaliso cunto habboon.
Meeshu sidoo kale waa mid aad u fiican. Qurxinta casriga ah, qoryaha iyo isku dhafka midabada ayaa ka dhigaya La Hummuseria meel aad u raaxo badan oo ah meesha waxaad neefsataa vibes wanaagsan.
Aqalka Penthouse 11
Haddii aad dhex marayso ama haddii aniga oo kale aad jeceshahay magaalada, kama bixi kartid Madrid adigoon ku raaxaysan mid ka mid ah aragtiyada ugu wanaagsan ee caasimadda. Waxa jira hudheello, dabaqa ugu sarreeya, leeyihiin terrace in la cuno oo la cabbo. In kasta oo meelahaasi inta badan aysan ahayn kuwo aad u jaban, haddana waxaa habboon in marba marka ka dambeysa la sii socdo.
Terrase of Hotel Iberoestar las letras, Attic 11, ayaa ah kan aan ugu jeclahay. Iyada oo leh jawi dhalinyaro iyo daryeel la'aan, Qeybta 11, ayaa ah meel ku habboon in lagu arko qorrax dhaca, leedahay is biirsaday oo dhageyso muusikada wanaagsan. Habeenada Sabtida iyo Jimcaha waxay abaabulaan fadhiyada DJ, qorshe weyn haddii aad raadineyso inaad ku raaxeysato in muddo ah meel cusub oo gaar ah.
Muuqaal kale oo xiiso leh ayaa ah cunnadiisa, oo ku saleysan cuntada Mediterranean iyo alaabta Gormeega dhalasho ahaan. Suxuunta waxaa soo diyaariyay kuugga Rafael Cordón waxaana lagu diyaariyay a Gastro Bar ku yaal banaanka, marka la eego macaamiisha.
Duqa Magaalada Taqueria El Chaparrito
Mararka qaar waxaan dooneynaa inaan kala duwanaano oo aan isku dayno waxyaabo cusub, nasiib wanaag Madrid waa magaalada ugu fiican ee sidaas la sameeyo. Sannadka 2020 - 2021 waxaa loo magacaabay Ibero-American Capital of Gastronomic Culture. Marka hadaad jeceshahay cuntada latinHa walwelin, uma baahnid inaad wiig walba usbuuc duulimaad qabsato si aad ugu raaxaysato.
Shakhsiyan, waan ku faraxsanahay gastronomy-ka Mexico waxaanan booqday taquerías kala duwan oo Madrid ah. Shaki la'aan, kan aan ugu jeclahay wuxuu ahaa "Duqa Magaalada El Chaparrito". Waa meel, oo qiyaastii 200 mitir u jirta Duqa Plaza waana mid si raqiis ah u jaban. Waxay ku bixiyaan tabo at 1 euro, sidaa darteed waad isku dayi kartaa ku dhowaad dhammaan menu-yada iyagu way macaan yihiin! Waxaan tagay Mexico waxaanan ku dhaaran karaa in cunada meeshan ka jirta ay adiga kugu wargalinayso.
Haddii aad ku sugan tahay xarunta oo aadan rabin inaad lacag badan ku bixiso, qorshahan waa mid aad u xiiso badan. Meeshu waa mid qurux badan, Waxaa lagu sharraxay midabyo dhalaalaya, muraayadaha iyo faahfaahinta kaa dhigi doonta safar. Shaqaaluhu waa dad saaxiibtinimo badan. Haddii aad waqti yar haysato, waxaan kugula talin lahaa inaad fadhiisatid baarka, dalbato xoogaa margaritas ah iyo labo tacsi, cochinita pibil iyo tacos classic wadaad.
Hadaad wali rabto ku dhex mari dhadhanka, Waxaad jeclaan doontaa Miyama Castellana. Makhaayaddan Jabbaan waxay ka furatay Madrid sanadkii 2009, ilaa waqtigaasna, waxay ku guuleysatay inay ka guuleysato dadka jecel cunnada Japan.
Xuquuqda gudaha Paseo de la Castellana, meesha, mid yar oo raaxo leh, ayaa ku habboon in lagu raaxeysto cunno dheer asxaabta ama qoyska. Kuugga, Junji Odaka, ayaa ku guuleystey inuu sameeyo menu suxuunta dhaqanka ee ugu badan Japan, iyada oo siineysa taabasho casri ah iyo bilic qurux badan.
Makhaayada si gaar ah uma jabna, laakiin cunnooyin tayo sare leh, qiimayaashu sidoo kale ma badna. Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah liistadeeda waxaa ka mid ah: wagyu hilib, the sashimi dibi, ka nigiri kalluunka tuna iyo dabcan sushi.
Markaad timaado magaalo cusub, waxa xiisaha lihi waa inaad tijaabiso cuntooyinkeeda caadiga ah. The Caanaha Madrid Waa tan dhaqanka ugu caamsan ee ku jirta dhammaan calool-xanuunka bulshada, sidaa darteed, haddii aadan ka soo jeedin Madrid, waa inaadan iska lumin fursadda ah inaad isku daydo.
Waxaa jira meelo aan la tirin karin oo ay ugu adeegaan fuud wanaagsan, laakiin haddii ay tahay markii ugu horreysay… maxaad ugu sameyn weyday meel taariikh leh? Casa Lhardy, oo dhowr mitir u jirta Puerta del Sol, waxaa la aasaasay 1839. Makhaayada, oo loo tixgeliyo tii ugu horreysay ee Madrid oo dhan, waxay ilaalisaa qurxinta qarnigii XNUMXaad oo xitaa waxay u muuqataa in lagu xusay shaqada qorayaasha dhererka Benito Pérez Galdós ama Luis Coloma. Marka haddii aad rabto inaad la kulanto Madrid dhaqameedka, meeshan waa waxa aad raadineyso.
Xagga cuntada, waxaad arki doontaa inay cilmi tahay cunistiisa. Casa Lhardy, waxay ugu adeegaan laba qaybood, marka hore maraqa ka dibna inta kale. Waxaan jeclahay inaan wada cuno dhamaanteed, waxaan u maleynayaa in, in badan oo dadka deegaanka ah, tani ay u noqon doonto aber weyn. Laakiin, wax alla wixii aad cuntaan, fuudku waa macaan yahay waana fiicanyahay xilliga qaboobaha.
Haddii aan sii wadno ka hadalka cunnada caadiga ah, ma ilaawi karno sandwich sandwich. Waxay u muuqan kartaa inay tahay "qalaad" isku dhaf ah kuweena aan ka soo jeedin magaalada sidaas darteed, waxaa jira dad aan ku dhiiran karin inay isku dayaan, laakiin waxaan kuu xaqiijinayaa inay tahay in loo dhinto. Dhowr baa jira dhismayaasha ku wareegsan Duqa Plaza Way u adeegaan oo, inkasta oo ay badanaa ka buuxaan dad maxaa yeelay waa goob dalxiis aad u badan, waxaa habboon in la sugo oo la cuno rootigaaga intaad magaalada ku dhex wareegeyso.
Baarka La Campana waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan Madrid waana iibiyaan Ismarisyada Calamari kaliya 3 euro. Adeeggu waa mid aad u dhakhso badan oo biirka waa mid aad u qabow Maxaa intaa ka badan oo aad dooneysay !?
Tavern iyo Warbaahinta
Ma jiraan wax ka jacayl badan casho wanaagsan oo lagu daray khamri? Taberna y Media waa makhaayad ku habboon inaad lamaanahaaga ka yaabiso, ama yaa kale oo aad jeceshahay, oo leh cunno aad u fiican jawi dhow iyo mid gaar ah. Maxaa intaa ka badan, waa cadaalad ku xigta Beerta Retiro, mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee Madrid. Ku wareejinta sambabkaan cagaaran waa mudnaan.Ma jiro qorshe ka fiican oo lagu yareeyo cuntada!
Makhaayada waxay leedahay sheeko aad u qurux badan oo ka dambeysa, waa mashruuca aabe iyo wiilkiisa, José Luís iyo Sergio Martínez, oo ku soo biiray fikradahooda si ay u abuuraan booska loogu talagalay qasabada iyo raashinka dhaqameed.
Baarkisa iyo qolka cuntada, waxay ku bixiyaan alaab tayo sare leh, suxuun dhaqameed aad uqurux badan leh taabasho leh cunno xumo. Dhabanka la ruugay oo leh khudaar iyo kookaha, saladhka guriga iyo seddexaadba waxay leeyihiin dhadhan cajiib ah. Haddii aad aniga oo kale tahay, oo had iyo jeer ka taga meel yar oo macmacaan ah, ma awoodi doontid inaad iska caabbiso dalbashada rootiga suuxdinta kareemka leh jalaatada barafka leh.
Vermouth waa xarun ku taal Madrid, haddii aad rabto inaad dareento inaad tahay hooyo dhab ah oo Madrid ah, ma dhaafi kartid saacadda aperitif. Helitaanka runta dhabta ah ee Madrid waa wax fudud, waxaa jira goobo xitaa bixiya noocyo kala duwan. Tusaale ahaan, La Hora del Vermut, gudaha Suuqa San Miguel, wuxuu leeyahay wadarta 80 magac oo asal ahaan ka soo jeeda dalka. Waa macbud loogu talagalay cabitaankan oo waliba leh taambo aad u wanaagsan iyo cunno cunno cunno ah.
Si kastaba ha noqotee, anigu waxaan ka ahay dadka maxalliga ah ee dhaqanka faafiya, si aan u cabbo afka loo yaqaan "vermouth", ma jiraan wax ka roon barxad wanaagsan oo foostooyinku ku jiraan La Taberna de Ángel Sierra waa suurtagal meesha ugu saxsan ee aan abid kula kulmo magaalada. Waxay ku taal Chueca, waxay u taagan tahay qurxinteeda. Dhalooyinka ku soo ururay darbiyada, alwaaxa mugdiga ah, saqafka ay ka buuxaan sawirro iyo sawir gacmeedyo, waxyaalaha xusuusta ee qaabaysan iyo taayirada Cartuja de Sevilla waxay ka dhigayaan meel gaar ah oo mudan in la soo booqdo.
Madrid waa mid aad u xiiso badan waana hubaa inaad jacayl ku qaadi doontid. Waxaan rajeynayaa in liiskan oo ah 9 makhaayadood oo lagugula taliyay magaalada ay kaa caawin doonaan inaad ku raaxeysato caloosha, laakiin haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato booqashadaada caasimadda, waxaa kugu dhiirrigelin kara liistadan 10 waxyaabaha ugu fiican ee lagu sameeyo Madrid.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Madrid » Xagee laga cunaa Madrid? 9 makhaayadood oo lagu taliyo magaalada
Farriin weyn. Si aan ugu xisaabtamo safarkayga xiga ee Madrid.